Fikradaha Dhalashada Fiyatnaamiya - Dhulkii Quduuska ahaa ee Daraasadaha Vietnam
Qeybta VIETNAM VIVILIZATION waa qeyb ka mid ah qoraalada ku saabsan dhaqanka Vietnamese, ilbaxnimada, caadooyinka, caadooyinka iyo wixii la mid ah.
Inta lagu jiro Tet2, dad badan ayaa fiiro gaar ah siiya sida labbiska leh ee labbiska loo labisto marka loo eego labisashada sida raaxada leh, waayo waxay mararka qaarkood door bidaan muuqaal wanaagsan oo diiran.
Guddoominta: Mr. GEORGE CŒDÈS, (Jaantus 1) Guddoomiyaha - Machadka Indochinese ee Daraasaadka Aadanaha wuxuu la kulmay Febraayo 22, 1943, 17: 45, Machadka Anatomiga.
Hits: 636 The thanhdiavietnamhoc.com - Asso. Prof. HUNG NGUYEN MANH, PhD wuu dhammaystiray oo wuxuu diyaariyey inuu daabaco CARRUURTA
2336 Views Pierre Huard
Dhaqanka Fiyatnaamiiska iyo ilbaxnimada ayaa sidaas ka dhigeysa in guud ahaan caalimka kaas oo Fiyatnaamiisku ay ku wada jiraan liimo isku mid ah, hal abuurayaal iyo xayawaanno.
Comments Off on Isku day ah in la barto TAARIIKHDA DHAQANKA ee farshaxanka VIETNAMESE MARTIAL Art - Qaybta 1
Booqashada Maanta: 0
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 2,921
Guud ahaan Wadarta: 285,816